MA XAQBAA KULMIYE MA QABANKARO ISU SOO BAX NABADEED IYO UDUB BEELAHA HAYSKA HORKEENTO? | Toggaherer's Blog
« Boon Xirsi wuu indho beelay fund raising ayaa loo qabanayaa caawiya plz.
XULSHADA TOGAHERER IYO MAANTA WAA MAANSADII ANUUN BAA HOOYADAA AH »
MA XAQBAA KULMIYE MA QABANKARO ISU SOO BAX NABADEED
IYO UDUB BEELAHA HAYSKA HORKEENTO?
Umada Somaliland waxay soo martay taariikh nololeed aad iyo aad u kala duwan oo mid waliba waayihiisa leeyahay. 1960 wixii ka horeeyay waxaynu ahayn dad gumaysi ingiriis haystey oo la soo dagaalamay xoriyadoodana aan si dhayal iyo baryo ku helin ee waxa ummadu usoo martay xoriyada dalkan midho qadhaadh iyo halgan naf iyo maalba inaga galay. Waxa aynu ka dagaalanay ee ula dagaalanay dawladii aduunyada ugu quwadda wayneyd wakhtigaa ee aynu ugu babac dhignay waa aad nolol xor ah oo xalaal ah ku noolaataan. Si kastaba ha ahaatee inaga oo calan qaadanay ayey 4 inan oo yaryari inta ay la ordeen la tageen xamar iyaga oo hebel ku xinni iyo hebel ka xigso leh. Waxaynu ku biirnay oo la midawnay shuruud la’aan Somalia iyada oo aan shacabkeena lagala tashan marnaba.
Midawgii Somaliya iyo ma hadhadii inaga gaadhay. Waxa aan la inoo ogolaan haba yaraatee wax gobbi mudantahay. Waxa aan la inoogu hayn wax abaal ah iyo wax qadarin ah toona. Waxa la tirtiray oo la inagala dagaalamay aqoontii iyo tacliintii iskuulada. Waxa la inagala dagaalamay in aynu yeelano wax madax ah oo la qadariyo. Waxa la tirtiray taariikhdii aynu lahayn oo la inaga dhigay dad gumaysiga daba dhilif u ahaa oo diinta ka soo horjeeday. Waxa dhacday in ragga kiisa muuqdaba guryaha lagala baxo oo lagu toogto suuqyada. Waxa la inagala dagaalamay dhaqaale, dheef iyo dhigasho midwalba. Xadgudubyada xuquuqda insaanka ayaa ahaa mid aan look ala aabo yeelin oo aan la ixtiraamin. Waxa la xalaashaday xoolihii shacabkeena. Waxa qasab noqotay in la qaxo oo xeryaha qaxootiga inteenii ilaahay ka badbaadiyey aynu ku fakano. Waxa la xasuuqay shacabkii Somaliland caruur iyo ciroolaba. Waxa wakhtigaa dadkeenu u kala baxay 2 qaybood, in la shaqaysa tuugtii dhibta, dhaca iyo boobka, dilka xadhiga, cago juglaynta iyo cabudhinta cadawgii waday. Iyo in ka soo horjeeda oo u dagaalanta xaqii iyo xormadii aynu lahayn. Xusuusta kama maydhi karo xubnihii SNM mujaahidiintii naf iyo maalba u huray inay badbaadiyaan shacabka dulman.
SNM sida aynu ognahay waxay ahaayeen ragii naf iyo maalba inoo huray. Ragii gawaadhida kaga daadguraynayey shacabka bayhoofsan magaalooyinka Somaliland. Waa ragii firxadkeenii ka ururinayey kaymaha bahalo galeenka ah. Waxa marnaba aan iloobayn hooyooyinkii, caruurtii, dhalintii dhamaan ay ka soo ururinayeen kaymaha halista colaadeed iyo mid bahalo lahayd. Hadaba waxa aynu ka dagaalanay ee naf iyo maalba aynu ugu huray waxay ahayd in aynu xoriyad ku noolaano oo nadaam waafaqsan shareecada islaamka aynu ku dhaqano. Hadaba inaga oo dhibaato fara badan u soo marnay nabadgalyada aynu haysano iyo sharciga aynu dhiganay ee ah inaynu noqono dal dimuquraadi ah, maxaa sababay in in yar oo ka mid ahayd nadaamkii Afweyne ee ina holciyey in ay isku urursadaan madaxtooyada iyo dawlada oo ay bilaabaan cago juglayn horleh, cabudhin, cadaadin, xadhin aan sharci ahayn oo loo adeegsado dadweynaha iyo siyaasiyiinta? In shakhsiyaadkan taariikhda xumi ku takri falaan hantidii dalkeena iyo dadkeena. Inay ka bilaabaan dadweynaha dhexdiisa colaado sokeeye, iyo in ay kuwii inoo halgamay ee naf iyo maalba inoo huray inoogu tusaan dhagarqabe yaal iyo dhiigya cabyo. Inay inoogu sawiraan halyeyadii SNM qaar nabada khalkhal ku haya oo inaguna dhagaysano. Shacabyohow waxaynu nahay kuwii ka dhiidhiyi lahaa xumaha loo huwinayo madaxdii SNM iyo nin qarmeedkii inoo halgamay. Waxay inaga mudanyihiin sharaf iyo cizzi iyo karaamo. Horaa loo yidhi lax waliba halka ay is dhigto ayaa lagu gawracaa! Shacabyohow halka aad madaxdiina iyo ragii naftooda idiin huray dhigtaan ayaa la idinku gawrici doonaa, idinkaana ishiina laga arkay oo la idinku khuukhinayaa kulmiye ayaa nabada khalkhal ku haya mana arkaysaan muaamaradaha ay maleegayso dawlada faqash ka xun ee sharcigiinii idin marin habaabisay.
Kolka udub ka ololaynayso colaad sokeeye iyo cabsi galin. Kala dil iyo naxli ay abuurto oo ka bilawdo beelaha dhexdooda, kolka ay ololaha noocaas ah waddo udub ee ay xor u tahay inay samaysato banaanbaxyo iyo shirar oo ay meel kasta ku qabato. Kolka UDUB rasaas ka dhex ridayso shirarka kulmiye iyada oo doonaysa inay shacabka ku kiciso kulmiye ee udub nabada dhaawacayso. Kolka udub u diiday kulmiye inay sharciga raacaan oo banaanbaxyo nabadeed oo salmi ah qabato isla markaana xuquuqdii urur iyo tii muwaadin labadaba ay jabisay UDUB. Kolka Udub sharci darro ku fadhido kursiga ee ay muujisay dictatorship, kolka udub damaceedu noqday hantida dalka oo la booboo, shirar lala yeesho dawlada shisheeye oo shacbiga lagu afduubayo. Kolka shacabku noqday dadka sirta laga qarsanayo ee sirtana lagu qarsanayo dawlada Somalia iyo jabuuti. Waxa isweydiin mudan maxaa xalaal ah ee udub lagu doortaa ama loogu ogolaadaa inay xilka hayso. Sifaha sharci ee udub aynu xilka ugu daynaa waa kee? Waxa la’yaableh shacabku hadaba ma xoolaa maxaa hoosdhigay ee ay uga dhagaysanayaan udub ugana yeelayaan xumaanta ay waddo.
Kulmiye waxa wasiir cirro sheegay in aan loo ogolaan shirar banaanbaxa oo ay qabtaan haduu yahay mid olole siyaasadeed iyo mid banaanbax salmi ahba. Waxaan leeyahay gabagabadii kulmiye wuxuu joojin doonaa banaanbaxa salmiga ah iyo ololaha siyaasadeed, kolka sharcigu, waa dastuurka Somaliland ee uu u diido, kolka Udub loo diido inay ka ololayso goobaha shirarka, kolka udub joojiso hanti lunsiga, iyo guud ahaan xadgudubyada ay u gaysanayso saxaafada iyo shacabka iyo siyaasiyiintaba. Kolka UDUB sifo sharci ku fadhiisato kursiga ee ay udub joojiso macangagnimada iyo waxshi nimada ay wado.
Waxa Kulmiye la cabudhin karaa kolka UDUB iyo Dawlad isku sheega la cabudhiyo ee sharcigu dhigo in aanay ololayn Karin shirarna qaban Karin. Hoteelada Shacabkana kolka la idiin diido ayaa loo diidi karaa axsaabta kale.
Waxaan leeyahay Wasiir Cirro, Cawil, Siciid Sulub, Cali Assad, Ducaale, Rayaale iyo inta la hal maasha. Adeer dalku waa Somaliland, Somaliland na waxa xoreeyey SNM oo aydaan midkiina ka mid ahayn. Waxa loo soo huray naf iyo maal markaa ha moodina in la idiinkaga hadhayo dunuubta aad dalka ka galaysaan. Taariikhdu way isqortaa imikana taariikh ayaa idinka qormaysa ee isku xishoodaoo ilaahay iyo umaddii xilka idiin dhiibtayba ixtiraama oo sifo sharciya la kaalaya, joojiya hanjabaada iyo cago juglaynta aad waddaan. Wuxuu yidhi Allaah yarxam C/laahi suldaan hashaan gaada waynoow libaax uga gaboon waayey inaan gorayo cawl uga tagaa waa hal soo gudhay. Adeershacabka Somaliland iyo ragii u soo halgamay way idin daawanayaan taariikhna way idinka qorayaan, kolkaa intii naf iyo maalba u soo hurtay dalkani walee idinkay idinku maqanyihiin inta aad ku ordaysaan xoolaha umada iyo xaq darrada aad wadaan. Lagama yaabo in la idiinka taggo gafka aad ka galaysaan shareecada islaamka, tan dastuurka, xuquuqda shacabka iyo siyaasioga midnaba. Shacabkuna xajiinta aad doonaysaan in aad marmarisaan KULMIYE shacabku waa arkayaa idinkana siisan mayno ee joojiya colaada iyo aad shacabka gashanaysaan, waa hadaad naftiina u naxaysaan oo sharaf in uun doonaysaan. Taariikhda SNM sidaa kuma baaba’ayso ee iska jira raggow.
Wa bilaahi tawfiiiq. Qalinkii. Fu’aad Ismaciil
This entry was posted on April 17, 2009 at 11:18 am and is filed under 1.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.